ZRP yobatsira nherera, chirikadzi
You are at:Home»NHAU DZEMUNO»ZRP yobatsira nherera, chirikadzi
By Munyori weKwayedza on	 January 6, 2017 · NHAU DZEMUNO
MAPURISA eZimbabwe Repulic Police ari kuita basa guru rekubatsira nherera nechirikadzi dzakasiiwa nemapurisa aishandira chikamu chePolice Protection Unit (PPU) kubudikidza nekuvapa chikafu nekubhadharira vana mari dzechikoro.
Vachitaura pakupa chirikadzi chikafu nguva yadarika muHarare, Officer Commanding Police Protection Unit, Senior Assistant Commissioner Lee Muchemwa, vanoti ibasa ravo kurangarira vamwe vavo vavakashanda navo, avo vakashaya, kuburikidza nekuchengeta mhuri dzavo.
“Chirongwa chatinacho nhasi chekubatsira nherera nechirikadzi dzakasiiwa nevamwe vedu vaishandira Police Protection Unit tinochiita gore negore apo tinenge tichigovera mhuri dzavakasiya chikafu nezvimwewo. Kunze kwechikafu, vana nemadzimai ava tinovabatsira nenzira dzakasiyana-siyana.
“Tinoendesawo vana kuchikoro kusvika kuyunivhesiti asi chatinoita ndechekuti vabereki vari kugara navo vatipe magwaro anoratidza danho ravasvika,” vanodaro Snr Asst Comm Muchemwa.
Vanoenderera mberi vachiti, “Makore mazhinji, tine munda watinorima tichizopawo mhuri idzi chibage kuti vakwanise kubatsirika. Izvi zviri kuitwa kumativi ose enyika. Dzimwe dzenguva imwe yemari iyi inobva kuhomwe yePolice Commissioner General’s Fun Fare, Horse Race pamwe nekune vamwe vanotibatsira.”
Mumwe ari kubatsirwa pasi pechirongwa ichi, Mai Sally Chikwiriro, vanoti vanofara zvikuru nekuwaniswa zvekudya pamwe nekubhadharirwa mari yevana yechikoro.
“Ndinotenda Commissioner-General Chihuri nevose vePolice Protection Unit vanoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi nekuti vanotibatsira zvikuru. Murume wangu akashaya muna 2012 asi kubva ipapo ndiri kuwana rubatsiro rwechikafu nemari yevana yechikoro.
“Ndinodawo zvakare kuti isuwo semadzimai akasiiwa nevarume tiine mhuri, ibasa redu kuti tishinge kuchengeta mhuri dzedu kuburikidza nekuita mabhindauko akasiyana-siyana,” vanodaro Mai Chikwiriro.
I personally commend what the ZRP is doing. I wish other departments would copy the good example.